Samatabbixiyeyaasha Nepal waxay dib u billaabeen baaritaanka tuulooyinka ay ku dhufteen dhulgariirka halista ah
September 14, 2020 2 min read By wardeeq news Reporter
Samatabbixiyeyaashu waxay dib u billaabeen raadinta Isniintii dadka la la’yahay tan iyo markii uu dumay dhulgariirku ku dhuftay seddex tuulo oo ka tirsan degmada Sindhupalchowk ee Nepal, sida ay masuuliyiintu sheegeen.
Ilaa iyo hada, 11 meyd ayaa laga soo saaray burburka waxaana booliska, askarta iyo dadka tuulada ay baadi goobayaan ugu yaraan 15 kale oo la rumeysan yahay inay ku aasan yihiin burburka dhulgariirka, maamulka dowlada Baburam Khanal ayaa khadka taleefanka ku sheegay.
Go’itaanka dhul gariirku aroortii hore ee Axada wuxuu xaaqay seddex tuulo ka hor inta uusan ku istaagin webi. Roobab isdaba joog ah ayaa dhib ka dhigay samatabbixiyeyaashu inay shaqadooda qabsadaan maalintaas.
Guryo iyo dad ayaa lagu qaaday Bahrabise, oo 100km (62 mayl) bari ka xigta caasimada Kathmandu una dhow xadka ay la wadaagaan gobolka Tibet ee Shiinaha, ayuu yiri sarkaal ka tirsan dowlada Nepalese Murari Wasti.
Tuulada iyo nawaaxigeeda ayaa ka mid ahaa gobolada ay sida ba’an ugu dhufteen dhulgariirkii Nepal ee sanadkii 2015 iyo dib u dhiska ayaa socdey markii dhul go ‘ay dhacday.
Roobab mahiigaan ah, oo sababay jaranjarooyin dumay, ayaa burburiyay in ka badan 100 guri oo ku yaal Bahrabise.
Nimphunjo Sherpa, duqa degmada Bahrabise ayaa yiri “Waxaan ka baqeynaa dhulgariirro badan maadaama ciidda ay daciiftay dhulgariirkii kadib.”
Degmadu waxay qorsheyneysaa inay u guurto degsiimooyin qatar ku jira, ayuu raaciyay.
Laba qof oo kale ayaa ku dhintay dhul go ’ka dhacay Baglung oo ku taal waqooyi-galbeed.
Labada dhul go ‘ayaa ku dhuftay tuulooyinka ka hor waaberigii dadkuna uma baxsan karin inay badbaadaan, samatabbixiyeyaashu waxay yiraahdeen.
Dhimashadii ugu dambaysay waxay qaadatay tirada dadka ku dhintay dhul go ‘iyo daadad xoog leh xilligii monsoon ee Juun-Sebtember illaa 314.
Ugu yaraan 111 qof ayaa wali la la’yahay halka 160 kalena la dhaawacay, ayuu yidhi Wasti.
Caadiyan Israaiil way kala qaybin kartaa Masjidka Al-Aqsa: Falanqeeyayaal
Xaddidaaduhu waxay ku soo noqdeen Jakarta iyada oo cisbitaalada, qabuuraha ay buuxsamayaan